Nahum 1 AKCB – 那鴻書 1 CCBT | Biblica
Nahum 1 AKCB – 那鴻書 1 CCBT
1Elkosini Nahum anisoadehu nhoma a ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛfa Ninewe ho.
Awurade Abufuw A Etia Ninewe
2Awurade yɛ ninkufo ne aweretɔ Nyankopɔn,
Awurade tɔ were, na abufuw ahyɛ no ma.
Awurade tɔ nʼatamfo so were,
na nʼabufuw tena wɔn so.
3Awurade bo kyɛ fuw, na ne tumi so,
na ɔtwe ɔfɔdifo aso.
Ne kwan wɔ mfɛtɛ ne ahum mu,
omununkum yɛ nʼanan ase mfutuma.
4Ɔteɛteɛ po na ɔma ɛyow;
ɔma nsubɔnten nyinaa yoyow.
Basan ne Karmel twintwam,
na Lebanon frɔmfrɔmyɛ nso kisa.
5Mmepɔw wosow biribiri nʼanim
na nkoko nan.
Asase, wiase ne wɔn a wɔwɔ mu nyinaa
6Hena na obetumi agyina nʼabufuw ano?
Hena na obetumi atena nʼabufuwhyew mu?
Nʼabufuw hwie te sɛ ogya;
abotan yam wɔ nʼanim.
ɔyɛ ahohia mu guankɔbea.
Nʼani wɔ wɔn a wɔde wɔn ho to no so no so.
8Nanso, ɔnam nsuyiri nwonwaso so
bɛma Ninewe aba awiei.
Ɔbɛtaa nʼatamfo akodu sum kabii mu.
9Pɔw biara a wɔbɛbɔ atia Awurade no,
ɔhaw biara remma nto so mprenu.
10Wɔde nsɔe bɛkyekyere wɔn ho,
na bere a wɔn nsa abow wɔn no
wɔbɛhyew wɔn sɛ nwuraguanee a wɔaboa ano.
11Ninewe, wo mu na
nea ɔbɔ pɔw bɔne tia Awurade
na otu fo bɔne no fi.
12Nea Awurade se ni:
“Ɛwɔ mu sɛ wɔwɔ nnamfonom a wɔdɔɔso de,
nanso wɔbɛsɛe wɔn ama wɔayera.
Yuda, ɛwɔ mu sɛ mama ɔhaw aba wo so,
nanso merenyɛ saa bio.
13Afei, mebubu konnua a ɛda wo kɔn mu
na matetew nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu.”
14Ninewe, Awurade aka ɔhyɛ asɛm a ɛfa wo ho:
“Worennya asefo a wo din bɛda wɔn so.
Mɛsɛe nsɛsode a wɔasen ne ahoni a wɔagu
a esisi wʼabosonnan mu no.
Mesiesie wo da
efisɛ woadan ayɛ atantanne.”
15Hwɛ mmepɔw no so,
nea ɔde asɛmpa no ba no anammɔn
ɔno na ɔka asomdwoesɛm!
Yuda di wʼafahyɛ na
di wɔ bɔhyɛ so.
Nnipabɔne rentu wo so sa bio;
Wɔbɛsɛe wɔn pasaa.
AKCB : Nahum 1
CCBT : 那鴻書 1